समाचार Archives - Page 10 of 12 - Mistikura
पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम सकियो, आउँदो असारभित्र सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने परियोजनाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । बहुप्रतिक्षित उक्त परियोजनाका जनशक्तिका लागि आठदिने तालीम दिइएपछि आउँदो असारभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै […]
हात भाँचिने गरी कुट्ने शिक्षिका लक्ष्मी पुन पक्राउ, के भन्छन् विद्यार्थी ?
रोल्पा– बिद्यालय ढिलो आएको भन्दै पाँच जना बिद्यार्थीको हात भाँचिने गरि कुट्ने शिक्षिकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रोल्पाको रुम्टीगढी गाउँपालिका–८ स्थित भानु आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीबाट गएको प्रहरी टोलीले […]
यात्रुलाई शौच गराउन रोकेको बस गुड्दा १० जना घाइते
दाङ – पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको रिहारमा आइतबार राति बस दुर्घटना हुँदा १० जना यात्रु घाइते भएका छन् । नारायणघाटबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेकाे ना ६ ख १२६४ नम्बरको बस लमही नगरपालिका ९ रिहार नजिक […]
चितवन । चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा डोजर चलाएपछि रोकिएको रंगशाला निर्माणकाे काम पुन: सुचारु भएको छ । सरोकारवाला सबै पक्षकाे सहयोग तथा आगामी दिनमा त्यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धतासँगै शनिबारबाट रंगशाला निर्माणकाे काम […]
अन्तरजातीय बिवाहा गर्ने यी जोडीलाई सलाम। भिडियो सहित !
चर्चित संचारकर्मी महिला अधिकारकर्मी सरु सुनार धेरै जसो दलित समुदायमा देखा परेको पछिल्लो समयमा महिला र बालबालिका माथी हुने बलात्कार बिषय बस्तु हरुको कडा आवाजमा आफ्नो फेस बुक मार्फत आवाज उठाउदै आएकी छन। आजको बिषय […]
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बारमा डोजर चलाएर भत्काउने प्रकाश कडेँललाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन
चितवन : चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बारमा डोजर चलाएर भत्काउने प्रकाश कडेँललाई नेकपा चितवनले पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। नेकपा चितवन जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियार इन्द्रजितले आज वक्तव्य जारी गर्दै उनलाई सदस्यबाट निलम्वन गरी कारवाही गरिएको […]
लोकप्रिय बजेट : सबैलाई खुसी बनाउने प्रयास
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याउँदा सबैलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिनेदेखि सामाजिक […]
कर्मचारीमा खुशी – तलब २० प्रतिशतले बढ्यो, कुन पदको कति पुग्यो?
१६ जेष्ठ, काठमाडौँ –सरकारले राजपत्र अनांकित कर्मचारीको तलबमा २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने राजपत्र अंकितका लागि १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट […]